App Store wuxuu si rasmi ah u qaataa talooyinka raadinta Mareykanka iyo Kanada | Wararka IPhone
App Store wuxuu si rasmi ah u qaataa talooyinka raadinta Mareykanka iyo Kanada
Angel Gonzalez | 30/04/2021 16:00 | Dukaanka App, Noticias
Bataasiyiinta macruufka 14.5 Waxay muujiyeen astaamo badan oo cusub oo aan hadda ku raaxeysan karno nooca ugu dambeeya. Si kastaba ha noqotee, shaqooyinka kale way sii qarsoon yihiin Apple ayaa isku dayi doonta inay si toos ah ugu dhaqaajiso markay u aragto inay habboon tahay. Mid ka mid ah shaqooyinkaas ayaa ahaa Soo-jeedinta raadinta App Store, hab waxtar leh oo lagu hago raadintaada barnaamijyada iyo waxyaabaha ka socda dukaanka weyn ee tufaaxa. Dhowr saacadood ka hor, si rasmi ah u bilaabay talooyinka raadinta ee Mareykanka, Kanada, Boqortooyada Ingiriiska iyo Australia.
Soo jeedinta raadinta ayaa halkaan loogu joogaa App Store
Ka xusho (ama ka dooro) talooyin dhowr ah si aad u turxaanbixiso raadintaada si aad uga heli karto xitaa barnaamijyo iyo ciyaaro aad u cajaa'ib badan.
Iyada oo loo marayo xisaabta rasmiga ah ee App Store on Twitter, Apple ayaa ku dhawaaqay imaatinka talo soo jeedin codsigaaga. Waa muuqaal horeyba looga heli jiray macruufka 14.5 ugu dambeeyay ee isticmaalayaasha qaarkood. Si kastaba ha noqotee, nooca ugu dambeeya kuma aanan arkin waxqabad guud oo qalabka ah.
Tan waxaa u sabab ah Waxaa laga heli doonaa oo keliya Mareykanka, Kanada, Ingiriiska iyo Kanada. Afartaan dal waxay noqon doonaan tijaabiyaasha beta ee shaqada u oggolaan doonta isticmaaleyaasha in ay astaan ​​u sameeyaan raadinta. Tusaale ahaan, waxaan dhigi doonaa "sawiro" iyo App Store ayaa kugula talin doona astaamaha sida "collages", "editor", "video", iyo wixii la mid ah. Waan awoodnaa xulo hal ama in ka badan tags waana nala tusi doonaa natiijooyinka kala duwan ee u dhigma raadinta saxda ah.
Ku soo bandhigida talooyinka raadinta ee App Store!
Xullo (ama dooro) talooyin badan si aad u sifeyso raadintaada si aad uga heli karto xitaa barnaamijyo iyo cajaa'ibyo ka sii yaab badan.
Talooyinka raadinta ayaa bilaabmaya maanta oo ka bilaabmaya USA, Canada, UK, iyo Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb
- Dukaanka App (@AppStore) April 29, 2021
Waxay u egtahay in bilaha soo socda shaqadan ay gaari doonto wadan kasta oo adduunka ah. Dhanka kale, waxaan awoodi doonaa inaan cusbooneysiino qalabkeena iOS 14.5 waxaanan ku raaxeysan doonaa dhammaan wararka ku jira, sida suurtagalnimada furitaanka iPhone-ka mahadsanidiisa Apple Watch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » App Store wuxuu si rasmi ah u qaataa talooyinka raadinta Mareykanka iyo Kanada
Fiidiyoow horeyba wuxuu u muuqday kala-soocii ugu horreeyay ee AirTag
Kawaran haddii Siri Remote cusub uu kasoo muuqday barnaamijka Raadinta?